"(Hoy Jesosy:) Izay manatona Ahy dia tsy mba holaviko mihitsy. Jaona 6:37 Apetraho aminy ny fanahianareo rehetra; fa Izy no miahy anareo." 1 Petera 5:7
«Tsy fiainana mihitsy izao!», hoy ny teny fandre matetika. Tsy tambo isaina ny fijaliana, tsy fahamarinana, fahavetavetana, fahasahiranana isan-karazany, nefa dia tsy maintsy miafara amin’ny fahafatesana! Tsy mahagaga raha miteny toy izany ny olona: ny hany fantany dia tsy fahazoana antoka amin’izao fiainana ankehitriny izao ary tsy fananana fanantenana momba ny any ankoatra. Ianao ve anisan’ireo izay mahita fa tena sarotra zakaina ny vesatry ny fiainana?
Misy anefa Olona iray Izay afaka mahatakatra ny manjo anao, satria Izy efa Olona teo anivon’ny olona, tety; an-tany. Jesosy izany! Koa fantaro fa velona Izy, ary liana ny aminao manokana.
Izy Izay nandatsa-dranomaso, dia mahay mampionona anao.
Izy Izay nankahalain’izao tontolo izao, dia te hampahafantatra anao fa tia anao.
Izy Izay nilaozan’ny rehetra, dia tsy handao anao na oviana na oviana.
Izy Ilay marina nohelohina, dia manolotra anao ny famelan-keloka avy amin’Andriamanitra.
Izy Izay nolavina, dia tsy handà anao.
Izy Izay novonoina teo amin’ny hazofijaliana, dia te hanome anao ny fiainana mandrakizay.
Inona no atao hananana Namana toy izany? Manatona Azy, mitondra ny fanahianao, ny alahelonao ary ny entana rehetra mitambesatra eo an-tsorokao. Angamba tsy fantatry ny hafa izany vesatra izany, fa Izy mahafantatra. Vonona hihaino anao Jesosy, ary tsy misy tsy ho voavahany ny olanao.